Umxholo wentengiso kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba | Martech Zone
Umxholo wentengiso kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba
NgoMvulo, Oktobha 14, 2013 NgoMvulo, Oktobha 14, 2013 UAdam Omncinci
Xa sakha Isosi seAgent ukudibanisa iisayithi, ukudityaniswa kwe-IDX, ukhenketho, ukhenketho lweselfowuni, ukhenketho lwevidiyo, ukuthengisa nge-imeyile, ukuthumela imiyalezo ngeSMS kunye nokuprinta, besisazi ukuba ukuthengisa umxholo yeyona nto ibalulekileyo ekuqhubeni ukuthengisa ngakumbi kwiiarhente. Kwaye, akumangalisi ukuba, iiarhente zethu eziphakamisa iqonga ngokupheleleyo zibone eyona mpendulo inkulu kunye namaxabiso asondeleyo.
Ukuthengiswa kokuqukethwe ayisiyo nje i-buzzword okanye ezinye iindlela ezingangqiniswanga, zokulinga zokuthengisa: iyasebenza. Ngapha koko, ukuthengisa umxholo kubonisiwe ukuvelisa malunga nokuphindaphindwe kathathu kuninzi kukhokelela kwidola njengokukhangela okuhlawulelweyo. Njengobuchwephesha bezindlu, nangona kunjalo, ukudala umxholo ohambelana nabaphulaphuli bakho kunokuba ngumceli mngeni. Emva kwayo yonke loo nto, abathengi bezindlu nomhlaba liqela elahlukileyo, elinamaxesha ahlukeneyo.
Indawo iphuhlise le infographic ethetha ngendlela enkulu ngayo intengiso yokuqulatha umxholo kwishishini lokuThengisa izindlu. Indawo yokuhlala yakha iiWebhusayithi eziPhendulayo zokuThengisa izindlu ngokudibanisa uyilo oluhle, ukubamba, kunye nokudityaniswa kwe-IDX / MLS.
tags: Umdibaniso we-idxkwi-infographicindawo yokubekaizindlu ezithengiswayoukuthengisa umxholo wearhenteukuthengisa izindlu nomhlabaiisayithi zokuthengisa izindlu nomhlaba
Powtoon: Yenza iiVidiyo zooPopayi kunye neeNtetho
Umahluko ophakathi kweNtengiso yeClassic kunye neNtengiso yezeNtlalo
Okt 15, 2013 ngexesha 4:57 AM
Iposti enkulu! Inokwazisa ngokwenene .. Ndifunde kakhulu! Enkoso ngokwabelana!